Farta Cismaaniya - Wikipedia
Alifbeetka Farta Cusmaaniyada.
Farta Cismaanya (; , al-kitābah al-ʿuthmānīyah; qaabka qoraalka: 𐒋𐒘𐒈𐒑𐒛𐒒𐒕𐒀) waa nidaam wax-qoris oo ka mid ah Far Soomaaliga taasi oo uu alifey Cismaan Yuusuf Keenadiid intii u dhaxaysan sanadkii 1920kii ilaa 1922kii. Cismaan Yuusuf wuxuu ahaa nin ka soo jeeda beesha Majeerteen, Daarood, kaasi oo uu dhalay Suldaan Yuusuf Cali Kenadiid; isla markii dambena boqor ka noqdey Saldanadii Hobyo.
2 Habka Farta
Cusmaan Yuusuf Keenadiid wuxuu ahaa nin Soomaali gabayaa, halabuur, qoraa, barre, hogaamiye iyo alife. Cusmaan waxaa si fiican loogu xasuustaa abuurida Farta Cismaaniya oo ka mid ah far-qorkii ugu horeeyay Taariikhda Soomaaliya. Cusmaan Yuusuf wuxuu ku dhashay magaalada Gaalkacayo, ee ku taala badhtamaha wadanka Soomaaliya. Cusmaan waxaa dhalay Suldaankii Yuusuf Cali Keenadiid oo ahaa ninkii aasaasay Saldanadii Hobyo. Wakhtiyadii ugu horeeysay noloshiisa wuxuu Cusmaan ku soo qaatey meelo kala duwan asagoo waxbarasho diini iyo maadi ah ku mashquulsanaa. Markii aabihii geeriyooday, wuxuu Cusmaan la wareegay hogaanka Saldanadii Hobyo.
Si la mid ah Farta Carabiga, farta Cusmaaniya marka la qorayo waxaa laga soo bilaabaa dhinaca bidix ilaa midig. Xarfaha fartu waxay ku salaysan yihiin xarfaha Alifbeetka Carabiga; shaqalada uu iyo ii waxaa fartani u qortaa waaw iyo yaa.
Nidaama Caalamiga (IPA)
𐒃 ja j [d͡ʒ] 𐒄 xa x [ħ] 𐒅 kha kh [χ]
𐒌 ga g [g] 𐒍 fa f [f] 𐒎 qaaf q [q]
Lambarka 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Cusmaaniya 𐒠 𐒡 𐒢 𐒣 𐒤 𐒥 𐒦 𐒧 𐒨 𐒩
Farta Cismaanya waxay ahayd Far soomaali lagu qori jiray Af-Soomaaliga. Farta Cismaanya ama Osmanya, waxa qoray, nin la dhihi jiray Cusmaan Yuusuf Kenadiid. Marki uu qoray fartan waxay ehayd, intii u dhaxaysay 1920 ilaa 1922, laakiin nasiib darro, farta nuuaan ah bulshada oo dhan may gaarin. Markii hore waxa jiray muran ku saabsan farta ay yeeln doonto luqada soomaaligu. Faro kala duwan oo la soo qori jiray waxa ka mid ah Farta Boorama, Farta Kadarre iyo Farta Wadaadka oo ah farta carabiga. Waxaana 1972 lagu wada hishiiyay farta laatiinka ah. Waxa ay ahayd fartii ugu horaysay ee ay Soomaali qorto.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Farta_Cismaaniya&oldid=161957"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 4 Oktoobar 2016, marka ee eheed 08:46.